१. विक्रम संवत् २१७७
विज्ञानले आफ्नो शक्ति देखाइरहेको थियो । कुरा आजभन्दा सय वर्षपछि अर्थात् विक्रम संवत् २१७७ सालको हो ।
एम्बुलेन्सले १ जना वृद्ध नेतालाई बेहोस अवस्थामा ठूलो अस्पतालमा लग्यो । उनलाई निकै महंगो लाइफ सेभिङ सुई दिइयो, जुन त्यो बेला चिकित्सा विज्ञानले पत्ता लगाएको थियो ।
होसमा आएपछि उनले भने, ‘यसभन्दा अघि मल्टिपल अर्गान फेलियर भएर सबै भाइटल अर्गानको ट्रान्सप्यालेन्ट गरेको थिएँ । बल्ल म सय वर्ष पुगें । राष्ट्रपति बन्ने धोको छ । कान्छी पत्नी बल्ल २० वर्ष पुगिन् । मलाई शारीरिक एवं मानसिक रूपमा जवान हुनुपर्नेछ । पैसाको चिन्ता छैन । स्विस बैंक, चाइना बैंक, इन्डिया बैंकदेखि प्रत्येक महादेशमा थुप्रै पैसा छ मेरो । पहिले कृत्रिम एवं मृत व्यक्तिको मस्तिष्क, मुटु, फोक्सो, कलेजो, किड्नी, स्नायु आदि प्रत्यारोपण गरेकाले स्वास्थ्य राम्रो भएन । यसपटक जीवित व्यक्तिहरूको सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यारोपण गर्नुपर्‍यो ।’
मानवता शून्य भएका पैसामा डुब्ने डाक्टरहरूले भने, ‘तपाईंका सबै अङ्ग ड्यामेज भएका छन् । छाला पनि रिपियर गर्न नमिल्ने भएको छ । फेरि अङ्गहरू म्याच पनि हुनुपर्‍यो । घटीमा १० जना स्वस्थ व्यक्ति तपाईंका लागि बलिदान हुन तयार हुनुपर्दछ । यो सम्भव छैन । हामी अर्गान बैंकमा रहेका अङ्ग प्रत्यारोपण गर्छौं । केही वर्ष स्वास्थ्य लाभ हुन्छ ।’
वृद्ध नेताले भने, ‘लिनुहोस् यो स्विस बैंकको अनलिमिटेड कार्ड । भोलि शहरमा दङ्गा हुनेछ, प्रहरीले बल प्रयोग गर्नेछ । सबै एम्बुलेन्सले घाइतेहरूलाई यही अस्पतालमा ल्याउने छन् । उपचारको क्रममा उनीहरूको मृत्यु हुनेछ ।’
२. आन्द्रामा घाउ
‘कसरी थाहा पाउनुभयो, आन्द्रामा घाउ भएको छ भनेर ?’ त्यसपछि चिकित्सक चर्को स्वरमा बोले, ‘आजभोलि कस्ता–कस्ता बिरामी आउँछन् भने, आफ्नो रोगको डाइग्नोसिस आफैं गर्छन् ।’
त्यसपछि चिकित्सकले रगत, दिसा, पिसाब, पेटको अल्ट्रासाउन्ड, इन्डोस्कोपी र कोलोनोस्कोपी गरेर रिपोर्ट ल्याउन भने ।
उनले अनिच्छापूर्वक सबै जाँच गरे । अलिकति कुट्की, पाषाणभेद र पाँचऔंले बेचेको पैसा जाँचपड्तालमै सकियो ।
अर्को दिन उनी रिपोर्ट बोकेर डाक्टरलाई भेट्न गए । अस्पतालमा झण्डै १ दर्जन सेतो कोट लगाएका सिकारूलाई उनले रिपोर्टबारे बताए ।
‘ओकल्ट ब्लड पोजिटिभ छ, इन्डोस्कोपी गर्दा आन्द्रामा घाउ देखिएको छ । अरू सबै रिपोर्ट नर्मल छ ।’
वृद्धले भने, ‘मैले शुरूमै आन्द्रामा घाउ भएको छ भनेको थिएँ । बेकारमा अनेक जाँच गरेर मेरो पैसा सत्यनाश पारिदिए । त्यही बेला घाउ सुक्ने औषधि लेखिदिएको भए म अहिले बेखर्ची त हुने थिइनँ !’